Ezumike Thailand Songkran: Enweghị mgbochi ma ọ bụ mkpọchi
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Ozi banyere njem na Thailand » Ezumike Thailand Songkran: Enweghị mgbochi ma ọ bụ mkpọchi
Akụkọ Mgbasa Ozi Omenala • etn • Akụkọ Ejiji • Itylọ Ọrụ Mmepe Ọbịa • Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa • iwughachi • Ozi banyere njem na Thailand • Akụkọ Njem Nleta • Akụkọ gbọ njem • Travel • Njem njem • Akụkọ njem • Nchedo njem na Mberede
Minista Ahụike Ọha na eze nke Thailand Anutin Charnvirakul kwuru na ndị mmadụ anaghị agagharị n'ụlọ n'oge ezumike Songkran maka ntụrụndụ na ị drinkingụ mmanya.
Songkran bụ ụbọchị ezumike mba afọ ọhụụ na Thailand nke ga - eme n’abalị iri na atọ nke ọnwa Eprel.
Mịnịsta Ahụike Ọha na eze nke mba ahụ kwuru na ndị mmadụ ka nwere ike ịga mpaghara ndị ọzọ na-enweghị iche iche.
Ndị njem achọtara na ha bu nje COVID-19 ga-abụ ndị a kpọpụrụ iche maka nchekwa ahụike nke ụmụ amaala na ndị ọbịa niile.
Dabere na Minista Anutin Charnvirakul, ọ bụ ezie na e kewara mpaghara dị iche iche na mpaghara, nke agba agba dị ka ọnụọgụ ọrịa ahụ, ọ nweghị nke a ga-ekpochi. Ndị mmadụ ka nwere ike ịgagharị n'oge ezumike Thailand Songkran na mpaghara ndị ọzọ na-enweghị ịbanye na mgbochi iche mgbe ha ruru ebe ha na-aga.
Naanị ndị ga-abụ amachibidoro ya, ọ ga-abụ na ndị butere nje ahụ ma ọ bụ na-ewere ha dị ka nnukwu ihe egwu, onye ozi ahụ kọwara.
Na aro nke ndị njem si mpaghara anagidere dị ka mpaghara uhie nwere ike ịkpalite nchekasị na mbata na mpaghara ndị ọzọ, Maazị Anutin kwuru na eziokwu Songkran ọdịnala, ndị mmadụ na-ala n'ụlọ bụ isi chọọ ngọzi n'aka ndị okenye a na-akwanyere ùgwù. Ha anaghị aga ebe ahụ ka ha chọọ ikpori ndụ, gaa ebe a na-a drinkingụ mmanya na ịga ebe ndị mmadụ juru, ka o kwuru.
Songkran bụ ezumike mba Afọ Ọhụrụ nke Thai nke na - eme na Eprel 13 kwa afọ, mana oge ezumike ahụ bidoro na Eprel 12-16. N’afọ 2018, ndị omebe iwu Thai gbatịkwuru emume a na mba ahụ niile rue ụbọchị ise ndị a ka ụmụ amaala wee nwee ohere ịla ụlọ maka ezumike ahụ.
N'oge mgbasa COVID-19, ndị mmadụ kwesịrị izere nnọkọ buru ibu. Onye Minista Ahụike Ọha na-arịọ ka ndị mmadụ nọrọ na nche ma kpachara anya, na ghara ịbụ ndị na-ahụkarị egwuregwu n'anya. O kwuru n'ụzọ doro anya na nje ahụ gbasaa n'etiti otu ndị mmadụ na-eleta ebe ntụrụndụ, o kwuru.
Akụkụ kachasị ama nke ememme Songkran bụ ịwụ mmiri. Omenala sitere na oge nhicha oge ezumike. Akụkụ nke ememe ahụ bụ nhicha ihe oyiyi nke Buddha. Iji mmiri a gọziri agọzi nke kpochapụrụ ihe oyiyi ahụ ịmịkọrọ ndị ọzọ bụ nke a hụrụ dị ka ụzọ isi kwanyere nsọpụrụ ma weta ọgaranya. Ọ naghị afụ ụfụ na Eprel bụ akụkụ kachasị ekpo ọkụ nke afọ na Thailand, yabụ ịbụ mmiri bụ ụzọ mgbapụ na-ekpo ọkụ site na okpomoku na iru mmiri.
N'oge a, ndị Thais ga-aga n'okporo ámá na-enwe ọgụ mmiri site na iji mmiri ma ọ bụ egbe mmiri ma ọ bụ guzoro n'akụkụ okporo ụzọ na eriri mmiri ma kpoo onye ọ bụla gafere. Ndị ọbịa nwekwara ike kpuchie nzu, bụ omenaala sitere na nzu nke ndị mọnk na-eji agọzi ngọzi.
Thailand dị ịtụnanya ga-eweghachi ọchị na ihu ndị ọrụ njem njem
Kenya Airways ụgbọ elu London gara aga